ကစားသမားသစ် အများအပြား ထပ်ခေါ်ရန်မရှိဟု ဂွါဒီယိုလာ အတည်ပြု - Yangon Media Group
ချန်ပီယံဆုအတွက် အားပြိုင်မှုမှာ ပိုမိုခက်ခဲလာမည်ဟု စတာလင်း ခန့်မှန်း
မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာက ယခု နွေဈေးကွက်တွင် ရိုဒရီတစ်ဦးတည်းကိုသာ ခေါ်ယူထားသော်လည်း မိမိလူစာရင်းအပေါ် ကျေနပ်အားရမှုရှိသည့်အတွက် အပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မပိတ်မီ ကစားသမားသစ်အများအပြား ထပ်မံခေါ်ယူမည် မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မန်စီးတီးသည် ယမန်နှစ်ရာသီက ပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကို နှစ်နှစ်ဆက် တိုက်ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး နောက်လာမည့်ရာသီတွင် ချန်ပီယံလိဂ်ကို အဓိကပစ်မှတ်ထားလာ ဖွယ်ရှိသော်လည်း အက်သလက်တီကိုကွင်း လယ်လူရိုဒရီကို ကလပ်စံချိန်တင်ပြောင်း ရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း ၇ဝ ဖြင့် ခေါ်ယူမှုပြု လုပ်ခြင်းသာရှိထားသည်။
ကစားသမားသစ်များ ထပ်မံခေါ်ယူ ခြင်း ရှိ၊ မရှိဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဂွါဒီယို လာက ”ကစားသမားသစ် အများကြီးခေါ် ဖို့မရှိပါဘူး။ ဈေးကွက်အခြေအနေက ခက်ခဲနေတဲ့အပြင် ကျွန်တော်တို့မှာလည်း လုံလောက်တဲ့လူစာရင်းရှိနေလို့ ကစားသမားသစ်တစ်ဦးမှ ထပ်မခေါ်တာဖြစ်နိုင် သလိုခေါ်ခဲ့ရင်လည်း တစ်ယောက်စ နှစ် ယောက်စပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်”ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ဂွါဒီယိုလာကအသင်းမှ ဆာနေးကိုခေါ်ယူရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အသင်းဟောင်းဘိုင်ယန်မှ ဥက္ကဋ္ဌရူမင်နစ်ဂီက မိမိကိုဝေဖန်ပြောဆိုမှုများရှိခဲ့သော်လည်း မိမိအနေဖြင့် မည်သည့်မှတ်ချက်မျှ မပေးလိုဘဲ ဘိုင်ယန်နှင့်မိမိအကြား ကောင်းမွန်သော ဆက်ဆံရေးရှိထားကြောင်း ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် မန်စီးတီးကွင်းလယ်လူ စတာလင်းက ချန်ပီယံလိဂ်မှာအရေးပါသော ဆုဖလားတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့ အတွက် ပရီးမီယားလိဂ်ကသာ အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်း၊ လာမည့်ရာသီတွင် ချန်ပီယံဆုအတွက် ပိုမိုခက်ခဲလာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်းဆိုခဲ့သည်။
စတာလင်းက ”မနှစ်က ချန်ပီယံလိဂ်မှာလီဗာပူးဗိုလ်စွဲခဲ့လို့ ကျွန်တော်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ကစားသမားတွေအတွက်ရော လီဗာပူးအတွက်ပါ ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ လာမယ့်ရာ သီမှာချန်ပီယံလိဂ်က ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးပါတာမှန်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိကရည်မှန်းချက်က ပရီးမီးယားလိဂ်ပါပဲ။ ချန်ပီယံလိဂ်က ဂုဏ်သိက္ခာအကြီးဆုံးလို့ လူတွေကပြောနေကြပေမယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပဲလေ့စ်၊ ဘန်လေတို့ကွင်းတွေမှာသွားက စားရတာမလွယ်ကူပါဘူး။ လာမယ့်ရာသီဟာ ပိုပြီးခက်ခဲလာမှာ ဖြစ်သလို သုံးနှစ်ဆက်ချန်ပီယံဖြစ်ရေးဆိုတာက ကျွန်တော်တို့အတွက် ကြီးမားတဲ့ စိန်ခေါ်မှု ပါပဲ”ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
ရီးရဲလ်၏ ဒဏ်ရာစာရင်းတွင် တိုက်စစ်မှူး ဂျိုဗစ် ပါဝင်လာ
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် ကျင်စန်းကျော့ဂိတ်၌ ပစ်ခတ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ယာဉ်သွားလာမှု ပြတ်တောက်ခဲ့ေ??
နာမည်ကျော် ပိုက်ကျော်ခြင်း ကစားသမားများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နောင်ရိုးဖလား ဖိတ်ခေါ် ပိုက်ကေ
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂို လ်ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံဂုဏ်ပြု သည့်လမ်း လျှောက် ဆ??
နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ မြန်မာနှစ်သစ်ကူး မိန့်ခွန်းကို ကြိုဆိုထောက်ခံသည့် ဆိုင်းဘုတ်တင်ပွဲ ပဲခူ
ဂိုးသွင်းရှင်အများဆုံး အသင်းအဖြစ် အာဆင်နယ်အသင်း ထိပ်ဆုံးတွင် ရှိနေ